Ukuhamba Komndeni | I-Seymour, IN | Isikhungo Sokuvakasha SaseJackson County
Chofoza ukuze uthole imicimbi yale nyanga e-Jackson County!
Hambisana nokwazi okusha eJackson County.
Chofoza lapha ukuze ubone Imikhosi yethu Nemicimbi.
Imikhosi Nemicimbi Yethu
Buka yonke imicimbi ekhethekile ngokukhetha usuku ekhalendeni noma ngokuchofoza ibha ebomvu ukuthola uhlu olugcwele.
I-Jackson County, IN
Ngeqoqo elikhulu lezindawo zokungcebeleka zangaphandle nemisebenzi enobungani bomndeni, izivakashi zingathola uchungechunge lwemisebenzi ngokusithinta e-Jackson County Visitor Center. Ukwenza uhambo lube lula kunoma iyiphi indlela, siyihora eningizimu ye-Indianapolis, ihora elisenyakatho ye-Louisville, KY, ihora ukusuka e-Cincinnati, OH, kanye nokweqa-nokweqa usuka e-Bloomington nase-Nashville, e-Indiana. Vele uthathe u-Exit 50 ku-Interstate 65 futhi uzosibona. Uhlu lwethu olubanzi lwemicimbi nemikhosi enobungani yomndeni, lukwenza ukwazi ukudala izikhathi ongenakulibaleka. Sikukhuthaza ukuthi usenze uhambo lwakho kulo lonke ulwazi ongase uludinge ukuze uhlele uhambo lwakho olulandelayo lokuya e-Jackson County, Indiana. Chofoza lapha ukuthola umhlahlandlela omncane oya eJackson County!
Amadolobha Akithi Amancane
Yakhiwe ngo-1850, lo mphakathi omncane uyaziqhenya ngamagugu awo. Uhlezi emigwaqweni yesifunda engu-58 kanye no-135, ungakwazi ukuhambahamba usuka eFreetown-Pershing Museum, ikhaya eliya ezintweni eziyigugu eziningi okuhlanganisa nenye yenyathi engu-7 Jackson County, uye esitolo sika-ayisikhilimu noma i-Sgt. Rick's American Cafe kanye ne-BBQ. Hlola izindawo zasemaphandleni ezinhle Iwayini laseSalt Creek futhi uthole ukunambitheka kwewayini labo eliwina imiklomelo ngenkathi uthatha ukubuka okuhle kwezwe.
Lo mphakathi ugubha ukuthi uyisihlalo sesifunda futhi uyikhaya lomlando ocebile lapho inkantolo yesifunda iba yisikhulu kuzo zonke izingosi zomlando kuwo wonke umphakathi nakuleyo ndawo ezungezile. Umphakathi uyakujabulela ukuba sekhaya kwabazowina umklomelo UJackson County Fair. I-Brownstown ihlezi ku-US50, okuwumgwaqo omkhulu osuka ogwini uye ogwini kanye nendlela enkulu yokuhamba empumalanga nasentshonalanga. Ngenkathi uhlezi emagqumeni abukekayo e-Jackson-Washington State Forest kanye ne-Hoosier National Forest, kuyimizuzu eyi-10 kuphela ukusuka ku-I-65.
Ukuqhuma nje ngokushesha ku-I-65 naku-US 31, iCrothersville iyikhaya lamaTigers abo aziqhenyayo kanye nonyaka wabo Umkhosi obomvu, omhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka. Umkhosi ugubha ukuthanda izwe kanye nefulegi laseMelika. Yaqala ukwenzeka ngo-1976 lapho i-United States igubha iminyaka eyi-bicentennial yayo. IHamacher Hall idlala indima enhliziyweni yalo mphakathi ochumayo. Imicimbi eminingi yomphakathi kanye netiyetha yedina ngezikhathi ezithile ingajatshulelwa kule ndawo yomlando. Igcwele izindawo zokudlela nezitolo, lona umlingani wethu oseningizimu e-Jackson County Hospitality.
ISeymour ifinyeleleka kalula ku-Exit 50 ku-I-65, US 50, US 31 nase-Indiana 11. UMeedy W. Shields nomkakhe u-Eliza P. Shields babhalisa isiza sedolobha laseSeymour ngo-Ephreli 27, 1852. ISeymour yakhula ngokushesha nge ukwengezwa kwe-Ohio ne-Mississippi Railroad ngo-1854 futhi kungekudala kwaba idolobha elikhulu kunawo wonke e-Jackson County. ISeymour inikeza imboni, ukuyothenga, indawo yokuhlala, ukudla kanye nemikhosi emikhulu nemicimbi, kufaka phakathi i- Seymour Oktoberfest, ehlonipha ifa laseJackson County laseJalimane. I-Rock'n Roll Hall of Fame inductee uJohn Mellencamp wazalelwa eSeymour, futhi izivakashi zingabheka izindawo eziningi kuwo wonke umphakathi. ISeymour nayo iyindawo yokuqala ukubanjwa inkunzi kwezitimela okuhamba phambili emhlabeni ngabakwaReno Gang abadumile. Buka ividiyo yale ndaba ngokuchofoza lapha. Idolobha elikhulu linikeza amathuba ahlukahlukene kepha alilahli lelo dolobha elincane.
I-Medora itholakala emaphethelweni aseningizimu-ntshonalanga ye-Jackson County futhi inikeza imibono emangalisayo kanye nalokho kuzwakala kwedolobhana elincane. Misa eduze kwebhuloho elikhavwe le-span emithathu elide kunawo wonke e-United States, elise-Indiana 235 noma ubone i-Medora Brick Plant yomlando. Abangane Bebhuloho Elihlanganisiwe Le-Medora bahlela Isidlo saminyaka yonke Ebhulohweni, okuwukuzithokozisa okuyingqayizivele kokudla ebhulohweni ngaphezu kwendali ethule nokuzijabulisa. Chofoza lapha ukuze ufunde mayelana nesidlo sakusihlwa. I-Medora iyisibonelo sokungenisa izihambi futhi kubonakala ngesikhathi somhlangano IMedora Goes Pink festival ngo-Okthoba noma Umkhosi Wekhisimusi weMedora ngoDisemba. IMedora iyatholakala kusuka e-US 50 noma e-Indiana 235.
IVallonia kwakuyindawo yokuqala yokuhlala eJackson County futhi yayisalungiselela ukuba yinhloko-dolobha yokuqala yombuso. IVallonia itholakala ngaphandle kwesihlalo sesifunda futhi iyatholakala kusuka e-Indiana 135. I-Fort Vallonia iyisikhumbuzo somlando waseVallonia ekuqaleni kwawo-1800 futhi iyaphila ngo-Okthoba ngesikhathi Umkhosi we-Fort Vallonia Days. Amagquma nemikhonto ayabonakala eVallonia nasezimakethe eziningana zepulazi futhi izitendi zokukhiqiza zingatholakala ezungeze indawo, eyaziwa kahle ngecantaloupe namakhabe amnandi.
hlola umlando weJackson County
Enye yezinto esizikhangayo kakhulu iminyaka engaphezu kwengama-60 kube yiBrownstown Speedway, etholakala eJackson County Fairgrounds. Imijaho ibanjwa izinyanga eziyisishiyagalombili ngaphandle konyaka kuthrekhi yokungcola, futhi sinikeza amakilasi ahlukene. Izivakashi zingaphinde zihlole umlando waseJackson County kunoma imiphi iminyuziyamu yethu eyisithupha, kufaka phakathi iFreeman Field Army Airfield Museum kanye neFort Vallonia Museum. Ama-buffs omlando angangena endimeni eyadlalwa yiJackson County ku-Underground Railroad, eyasiza izigqila ezazibalekile zathola inkululeko. Kukhona nezindlela eziningi zomlando, amabhuloho ahlanganisiwe, kanye nezinqolobane eziyindilinga izivakashi ezingazijabulela.
Abathandi bezobuciko bayakujabulela
Indawo Yobuciko Bendawo
Abathandi bezobuciko bazokujabulela ukuvakashela amaqoqo obuciko ahlukahlukene aseJackson County. ISouthern Indiana Center for the Arts, Swope Art Collection, kanye neBrownstown Fund for the Arts konke kunikela kusiko lendawo. Izivakashi zingaya futhi embukisweni kwenye yezinkundla zemidlalo yomphakathi bese zihamba ngomkhondo wobuciko ukuze zibone abaculi bendawo abaningi.
BONA ISIGCAWU SOBUCIKO
ezokungcebeleka zangaphandle zinhle kakhulu
Kubathandi bethu bangaphandle, iJackson County inikeza izinketho eziningi zokuzijabulisa. IMuscatatuck National Wildlife Refuge inikeza amathuba okuzingela, okudoba nawokubuka izinyoni. Noma ngabe kuseHlathini Yombuso iJackson-Washington, i-Starve Hollow State Recreation Area noma iHoosier National Forest ungakhetha indawo yokukhempa efanelekile ekhaya lakho-kude ne-adventure yasekhaya. Ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo nokugibela amahhashi kuyizindlela ezithandwayo zokuvakashela lezi zindawo ezingathintwanga, njengoba ziba amakhulu ezinkulungwane zamahektare. Isivakashi esithambekele kwezemidlalo, sinikela ngegalofu elihle kakhulu.